Katrineholm waa magaalo ka tirsan gobolka Södermanlan ee koonfurta Sweden ayadoo ay ku noolaayeen 32,000 qof (Sanadkii 2009) Katrineholm ayaa ahaan jirtay magaalo warshado leh wixii ka horeeyay sagaashameeyadii ayadoo markii dambe ay shaqo la'aan ka dhacday oo dadka degan ay u shaqo tagaan magaalooyinka kale ee u dhow. Guryaha: Helitaanka guryaha ee magaalada Katrineholm ayaa aad u adag ayadoo dadka qaar ay ku qaadato mudo dheer in ay guri helaan. Qofka guriga heesta ayay kamuunka siiyaan 7830kr waa haddii uu 29 sano jir ka weyn yahay. Halka qofka aan guriga heesan la siinayao 3500kr. Kirada guryaha ayaa la dhihi karaa waa mid qaali ah ayadoo 1kii qolf giradiisa lagu qiyaasi karo 2900. 3da qol ayaa qiyaastii ah 5400kr. Waxbarashada: Waxbarashada magaalada way fiicantahay ayadoo waqti la sugi jiray iskuulada SFIga xiligii hore balse hada ay soo fiicnaatay. Iskuulada ayaa la dhigtaa saacadaha 8:30-15:00. Shaqada iyo Baraaktiiga: Helitaanka shaqada ee magaalada waa mid aad iyo aad u adag ayadoo dhowr bilood oo baraaktiig ah laysku diro. Kamuunka ayaa gordhoweyd bilaabey mashruuc ah 2 maalmood SFI iyo 3 maalmood shaqo. Nolosha Guud iyo isku Socodka: Nolosha magaalada waa mid iska wanaagsan. Dukaamada waa weyn ayaa ku yaal magaalada sida ICA, LIDL, COOP sidoo kale waxaa ku yaal 3 dukaano kale oo laga helo cuntada xalaasha. Bulshada Soomaaliyeed ku nool magaalada dhowr jaaliyadood ayay leeyihiin ilaa 5. Sidoo kale muslimiinta magaalada ayaa masjid leh. Magaalada waxaa mara tareemada dheeraya iyo kuwa kaleba oo ku xiran gobolada dalka ayadoo sidoo kale leh basas ka dhex shaqeeya magaalada. Kamuunka dadka kaar bas ma siiya sidaa darteed waa layska lugeeyaa. Waxaa soo diyaariyay Sharmarke Abdi Ahmed Warbixintani waa mid ka mid ah barnaamijkii aan ugu tala galnay in aan kaga warano nolosha kamuunada Sweden. Adiguna waxaad noo soo diri kartaa warbixin ku saabsan nolosha kamuunka aad ku nooshahay.
Katrineholm waa magaalo ka tirsan gobolka Södermanlan ee koonfurta Sweden ayadoo ay ku noolaayeen 32,000 qof (Sanadkii 2009) Katrineholm ayaa ahaan jirtay magaalo warshado leh wixii ka horeeyay sagaashameeyadii ayadoo markii dambe ay shaqo la’aan ka dhacday oo dadka degan ay u shaqo tagaan magaalooyinka kale ee u dhow.
Guryaha: Helitaanka guryaha ee magaalada Katrineholm ayaa aad u adag ayadoo dadka qaar ay ku qaadato mudo dheer in ay guri helaan. Qofka guriga heesta ayay kamuunka siiyaan 7830kr waa haddii uu 29 sano jir ka weyn yahay. Halka qofka aan guriga heesan la siinayao 3500kr. Kirada guryaha ayaa la dhihi karaa waa mid qaali ah ayadoo 1kii qolf giradiisa lagu qiyaasi karo 2900. 3da qol ayaa qiyaastii ah 5400kr.
Waxbarashada: Waxbarashada magaalada way fiicantahay ayadoo waqti la sugi jiray iskuulada SFIga xiligii hore balse hada ay soo fiicnaatay. Iskuulada ayaa la dhigtaa saacadaha 8:30-15:00.
Shaqada iyo Baraaktiiga: Helitaanka shaqada ee magaalada waa mid aad iyo aad u adag ayadoo dhowr bilood oo baraaktiig ah laysku diro. Kamuunka ayaa gordhoweyd bilaabey mashruuc ah 2 maalmood SFI iyo 3 maalmood shaqo.
Nolosha Guud iyo isku Socodka: Nolosha magaalada waa mid iska wanaagsan. Dukaamada waa weyn ayaa ku yaal magaalada sida ICA, LIDL, COOP sidoo kale waxaa ku yaal 3 dukaano kale oo laga helo cuntada xalaasha. Bulshada Soomaaliyeed ku nool magaalada dhowr jaaliyadood ayay leeyihiin ilaa 5. Sidoo kale muslimiinta magaalada ayaa masjid leh.
Magaalada waxaa mara tareemada dheeraya iyo kuwa kaleba oo ku xiran gobolada dalka ayadoo sidoo kale leh basas ka dhex shaqeeya magaalada. Kamuunka dadka kaar bas ma siiya sidaa darteed waa layska lugeeyaa.
Waxaa soo diyaariyay Sharmarke Abdi Ahmed